सिन्धुपाल्चोक - लामोसाँघुलाई क्षेत्र नं‍ १ को शैक्षिक केन्द्र बनाउने योजना छ।
2010-05-09 01:34:04 | मेरो सिन्धु
जेठ १० गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने श्रमद्भागवत ज्ञान महायज्ञको तयारीका सम्वन्धमा सुनकोशी बहुमुखी क्याम्पसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापासँग मेरो सिन्धुका लेखनाथ नेपालले गरेको कुराकानी
तपाईं क्याम्पस व्यवस्थापन समितीको साथै राजनितीक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, महायज्ञको लागि दलहरुको कस्तो सहयोग जुटाउनुहुन्छ?
हामीले सुनकोसी बहुमुखी क्याम्पसमा विषय विस्तार र सेतीदेवी सारदा उमाविमा प्रविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्न महायज्ञ गर्दैछौं । महायज्ञ गर्नु भन्दा पहिला पनि क्याम्पसको लागि सहयोग होस भनेर सबै राजनितीक दल, निर्वाचित सभासद, पुर्वसांसद कहिल्यै छुटाएका छैनौं । लामोसांघु भनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको शैक्षिक र खेलकुदका लागी उर्वर भुमी हो भनेर चिनाउन खोज्दैछौं । लामोसांघुमा सेतीदेवी सारदा उमावि मावि सञ्चालन भएको केही वर्षमा नै उमावि र त्यसको केही वर्षमा नै स्नातक तहको पढाई सुरुभयो जुन जिल्लाको पहिलो क्याम्पस हो। अहिले शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न महायज्ञ गरिदैछ यसमा सबै राजनितीक दलसंग सहयोग, सहयात्राको आग्रह गर्दछौं र सहयोग पुगिरहेको अनुभव गरेका छौं ।
महायज्ञ गर्नुको उदेश्य के हो ?
क्याम्पसको शैक्षिक स्तर गुणस्तर र भौतिक पुर्वाधार जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । अहिले धेरै शैक्षिक बेरोजगारहरु उत्पन्न भइरहेको बेला सेतीदेवी सारदा उमाविमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात हुंदैछ । त्यहां पढेका विध्यार्थीले रोजगारी पाउन र स्नाकोत्तर सम्मको पढाई पनि लामोसाघुंमै साचालन होस विद्यार्थीहरुले थप विषयहरु छानेर पढ्न पाउन भनेर महायज्ञ गरिदैछ ।
महायज्ञको तयारी कति भयो ?
महायज्ञको लागी सबै विद्यार्थी अभिभावक शिक्षाप्रेमीधर्ममा आस्था र विश्वास राख्ने जनसमुदायहरुमा सन्देश् पुगोस भनेर प्रचार प्रसारलाई तिव्र बनाउने प्रयासमा छौं प्रचार सामाग्रीहरु तय गरिरहेका छौं । विद्यार्थी मार्फत साधारण पर्चा ठाउँ-ठाउमा पगेको छ । पण्डित र राधाकृष्णको फोटो सहितको रंगीन प्रचार सामाग्री सहर बजारमा राखेका छौं । व्यवस्थापन समिति संचालक समिति शिक्षकका एक-एक जना प्रतिनिधि एक-एक वटा गाविसमा गएर घरदैलो कार्यक्रम मार्फत सबैलाई निमन्त्रणा गर्दैछौं । राजधानिमा बसेर व्यवसायीक, आर्थीक, राजनितीक तथा अन्य पेशामा स्थापित भएका सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का सम्पूर्ण व्यक्तिलाई महायज्ञमा उपस्थीत गराउने उदेश्य छ । उहाँहरुले धर्मको नाममा, शिक्षाको नाममा आफ्नो जन्मभुमीको नाममा आफुले सकेको सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौं ।
क्याम्पसको आर्थिक अवस्था त यस भन्दा अघि पनि नाजुक थियो। आर्थिक अवस्था मजबुद बनाउन के-के गर्नु भयो ?
अहिले देशमा चार सय भन्दा बढी सामुदायीक क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् तर सुनकोसी बहुमुखी क्याम्पसलाई राज्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खासै ठुलो सहयोग गरेको छैन तर पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने क्याम्पस हाम्रै हो। आनुदान सहयोग भन्दा अन्य कुनै पनि किसिमको सहयोग प्राप्त भएको छैन । हामीले प्राध्यापकहरुलाई तलब खुवाउँदा गाविस, जिविस जिल्लामा संचालन भएका हाईड्रोपावर जसको प्रभावित क्षेत्रमा क्याम्पस पर्दछ आदीबाट सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ। विधार्थीबाट उठ्ने शुल्लकमा पनि कतिपय दलित जनजाती विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत देखी शत प्रतिशत सम्म छुट दिनुपर्ने अबस्था छ । अहिले पब्लिक क्याम्पसको केन्द्रिय स्तरको संस्था गठन भएको छ त्यस संस्था मार्फत राज्यलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौं । राजधनीबाट नजिकै रहेर पनि पुर्णरुपले क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक ,उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरुलाई लैजान सकेका छैनौं । क्याम्पस र सेतीदेवी उमाविमा जनशक्ति बाँडिएर प्रयोग भएको छ । उहाँहरुलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु दिन सकिएको छैन । यी कठिनाईहरुलाई समाधान गर्नको लागी यो विकल्प रोजेका हौं ।
अब लामोसाँघु स्नाकोत्तरको लागि सिन्धुपाल्चोकको केन्द्र बन्छ होईन त कुन-कुन संकायको पढाई साचालन हुन्छ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तीनवटा क्षेत्र छन तर ती तीन क्षेत्रको भौगोलिक बनोट तीन जिल्लाको जस्तो छ । चौतारा साँगाचोक मेलम्ची ग्याल्थुमका विद्यार्थीलाई लामोसाघुंमा डेरा गरी बस्नु पर्छ । यस्तो परिस्थिमा वैकल्पीक रोजगारीको लागी विद्यार्थीहरु काठमाडौं जाने गर्दछन । लामोसाँघुमा वैकल्पीक रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले लामोसाँघुलाई क्षेत्र नं‍ १ को शैक्षिक केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना छ । संकायको बारेमा टुंगो लागिसकेको छैन । वरिपरिका क्याम्पसमा पढाईहुने विषय र विद्यार्थीको चापको आधारमा संकाय तय गरिन्छ । मेरो अनुभवमा बहुदल प्राप्त भएपछि हाम्रा महिला दीदी-बहिनीछोरी-बुहारीहरुले स्कुल तहबाटै पढाई छोड्नुपर्ने अबस्थाबाट धेरै अगाडी आएको छ । गाँउका प्लस टु र क्याम्पसमा छोरी-बुहारीहरुको संख्या निकै बढेको छ। हामीले स्नाकोत्तर संचालन गरेपछि स्नातक गरेर बसेका छोरी-बुहारीहरुलाई स्नाकोत्तर गर्ने ठुलो अबसर मिल्नेछ । जब नारी शिक्षित हुन्छन तब समाज परिवर्तन हुन्छ ।
महायज्ञमा कति मानिस उपस्थित होलान् ?
महायज्ञप्रति भक्तिभाव राख्ने एक हजार देखि पन्ध्रसय सम्म स्थानिय मानिसहरु उपस्थीत हुने अनुमान छ । हामी उधोग वाणिज्य क्षेत्रमा लागेका सम्पुर्ण मानिस घर-घरबाट लिएर जानको लागी टोली गठन गरेका छौं । हामीले दाता पहिचान समिती पनि बनाएका छौं । हामी यो संचार माध्यामबाट पनि अनुरोध गर्छौं कि काठमाडौंमा आएर बस्ने महानुभावहरु जसले हिजो उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्नु भएको छैन, त्यो आफ्नो पिडालाई सम्झेर अहिलेका विद्यार्थीलाई सहयोग गरिदिनुहुन समितीको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
हाम्रो सिनधु लाई कसरी अगडि बढाउने र चिनाउने तिर लाग्नु पर्छ है ?
- सुनिल योनजन : लिसखु ४बाटोमुनि